Man Utd Oo Kaalinta 2aad Ee EPL Kusoo Laabatay Kadib Markii Ay Garaaceen Crystal Palace %
Manchester United, ayaa dib ugu soo laabatay kaalinta labaad ee shaxda kala horeynta Premier League, kadib markii ay 3-2 kaga soo badiyeen Crystal Palace, oo joogta garoonkeeda Selhurts Park.
1-0 ayaa lagu kala kalamay qeybta koowaad, taasoo lagu leeyahay Red Devils, iyadoona daqiiqadii 11aad ee qeybta koowaad ka dhaliyay ciyaaryahankii hore ee Tottenham, wiilka lagu magacaabo Andros Towsend.
Markii dib leyskugu soo laabtay Boga labaad ee ciyaarta, waxaa islamarkiiba hogaanka sii dheereystay Crystal Palace, iyadoona uu udhaliyay ciaaryahanka lagu magacaabo Patrick van Aanhotl, daqiiqadii 48aad.
Laakiin, ciyaartoyda Man United isma-dhigan, dadaal ay sameeyeen gool ayay soo celiyeen daqiiqadii 55aad, waxay kaga mahad-naqayaan Chris Smalling, kaasoo shabaqa gil-gilay xili kooxdiisa ay gool ubaahneed.
Romelu Lukaku, ayaa wuxuu dhaliyay daqiiqadii 75aad goolkii bareejadda, waxaana uu goolkaas aad uga farxiyay tagaeerayaasha iyo guud ahaan shaqaalaha kooxda kasoo kicitan-tay Old Trafford.
Gaba gabadii ciyaarta, iyadoo 90+1 ay tahay ayaa waxaa goolka guusha udhaliyay United, laacibkeeda Nemanja Matic, iyadoona uu ka dhigay kulanka 3-2, sidaasna kooxdiisa ugu hogaamiyay guul soo laabasho ah.
Guushaan ayaa waxay siineysaa kooxda Jose Mourinho inay 62 dhibcood ay yeeshaan, islamarkaana ay soo galaan kaalinta labaad, iyagoona kala baxaya kooxda Liverpool, kuwaasoo hada leh 60 Buundo.
Crystal Palace vs Man UnitedPremier League